Global Voices teny Malagasy » Mangina avokoa ny ao amin’ny mandatehezana Shinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Novambra 2018 4:04 GMT 1	 · Mpanoratra Tian Yi Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Teknolojia
Mbola nisarika adihevitra mafana hatrany ny lohahevitra momba ny aterineto sy ny fanivanana gazety ao Shina taorian'ny fivorian'ny kongresy Amerikana momba ity olana ity tamin'ny herinandro lasa . Rebecca MacKinnon nanoratra fanadihadiana iray feno momba ireo adihevitra teo amin'ireo blaogy amin'ny teny Anglisy momba an'i Shina . Nanonona ireo bilaogera roa amin'ny teny Shinoa malaza, Anti sy Keso  ihany koa izy.
Mitovy hevitra ireo bilaogera roa ireo araka ny nambaran'i Anti ary nadikan'ny ESWN :
Ankoatra an'i Keso sy Anti, toa mangingina momba ity olana ity ny sisa amin'ireo bilaogera Shinoa. Namoaka ireto vokatra manaraka ireto ny fikarohana amin'ny teny sinoa ao amin'ny Sina  sy Bokee , BSP Shinoa roa lehibe indrindra, ary ny MSN Spaces , BSP iraisam-pirenena hany hita ao Shina:
– Nanome valiny maro ny “Kongresy Amerikana”, ny ankamaroany dia tsy nilaza ny fotoam-pivorian'ny kongresy tamin'ny herinandro lasa. Bilaogy iray ihany  no namerina namoaka ny lahatsoratra nosoratan'i Anti voalaza etsy ambony .
– Nanome vokatra betsaka ny “Ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety”, ny ankamaroan'izy ireo dia ao amin'ny fandaharan'ny “Reporters sans frontières” tamin'ny taona 2005 ka laharana faha-159 amin'ny tondro momba ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety i Shina, toy ity bilaogy ity .
Noraràn'ny governemanta Shinoa tao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra ao Shina ny fitaterana ity fotoam-pivorian'ny Kongresy Amerikana, izay tsy maintsy nandray anjara tamin'ny fahanginana momba ity raharaha ity tao amin'ny tontolon'ny bilaogy amin'ny teny Shinoa. Mandritra izany fotoana izany, dia hita fa tsy ny mpiserasera Shinoa ihany no mientanentana mikasika ity olana ity fa ao koa ireo namany vahiny. Mercury News, gazety amerikana iray, nampiditra ireto fanadihadiana manaraka ireto tamin'ny lahatsoratra vao haingana :
Ny sasany amin'ireo valin'ny fikarohana avy amin'ny “Fahalalahan'ny gazety” dia niresaka ny olan'ny sivana. Bilaogy iray tahaka izany nitaraina momba ny nahazo ny Beijing News nosazian'ny governemanta , ka tantarain'ny bilaogy amin'ny teny Anglisy Danwei ny antsipiriany amin'izany . Ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra, nanoratra ny mpamaky iray hoe:
Mifanohitra amin'izany kosa, manatri-maso ny fiakaran'ny adihevitra momba ny Fitoriana ny Steamed Bun ny tontolon'ny blaogy Shinoa. Chen Kaige , tale mpamokatra ilay sarimihetsika malaza Farewell My Concubine  no nametraka fitoriana ilay mpanoratra horonantsary 20 minitra mampiasa ny haitraitra haiadin'i Chen farany, The Promise (malaza any andrefana toy ny Lehiben'ny “ Crimson Armor “ , araka ny fanazavan'ny ESWN . Nasongadina be tao amin'ny pejy fandraisan'ny bilaogy Sina  ity lohahevitra ity.
Azo vakiana amin'ny fomba roa ny zava-misy fa nandresy ny lohahevita lehibe momba ny sivana amin'ny media tao amin'ny tontolon'ny bilaogy amin'ny teny Shinoa ny fitoriana ny indostrian'ny horonantsary – voasazy amin'ny fomba mahaketraka ny fampahalalam-baovao Shinoa, na mampiasa izany fitoriana izany ireo mpiserasera Shinoa mba hanehoany ny hatezerany amin'ny orinasa. Massage Milk , bilaogy malaza amin'ny Shinoa, nilaza izao manaraka izao momba ny horonantsary 20 minitra, nadikan'ny ESWN :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/18/130181/
 fivorian'ny kongresy Amerikana momba ity olana ity tamin'ny herinandro lasa: http://news.com.com/Capitol+Hills+fury+on+China/2009-1028_3-6040291.html
 fanadihadiana iray feno momba ireo adihevitra teo amin'ireo blaogy amin'ny teny Anglisy momba an'i Shina: http://rconversation.blogs.com/rconversation/2006/02/gofa_bloggers_r.html
 Anti : http://anti.blog-city.com/1634657
 Nesorin'ny MSN Spaces : http://www.zonaeuropa.com/20051227_1.htm
 MSN Spaces: http://spaces.msn.com
 Bilaogy iray ihany : http://blog.sina.com.cn/u/465277a9010002lo
 ity bilaogy ity: http://naturalist.blogchina.com/3317633.html
 lahatsoratra vao haingana: http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/news/world/13880590.htm
 nahazo ny Beijing News nosazian'ny governemanta: http://blog.sina.com.cn/u/540c92840100007u
 bilaogy amin'ny teny Anglisy Danwei ny antsipiriany amin'izany: http://www.danwei.org/archives/002370.html
 Chen Kaige: http://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Kaige
 Farewell My Concubine: http://www.rottentomatoes.com/m/farewell_my_concubine/
 Lehiben'ny “: http://movies.yahoo.com/shop?d=hv&cf=info&id=1808756416
 fanazavan'ny ESWN: http://www.zonaeuropa.com/culture/c20060216_1.htm
 Massage Milk: http://lydon.yculblog.com/